निषेधाज्ञा थप गरिएको पहिलो दिनै सवारीसाधनको चहलपहल ! - नेपालबहस
निषेधाज्ञा थप गरिएको पहिलो दिनै सवारीसाधनको चहलपहल !
| ५:३९:३४ मा प्रकाशित
२२ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा शुक्रबारदेखि १० दिनको लागि थप गरिएको निषेधाज्ञाको पहिलो दिन हिजो सवारीसाधनको चहलपहल निकै बढेकाे छ । सवारीसाधन सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन नगरिएको भएपनि शुक्रबार उपत्यकाका सडकमा पहिलेभन्दा धेरै गाडी चलेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा शुक्रबार बिहानबाट परिवर्तित निषेधाज्ञा जेठ ३१ गतेसम्म लागु रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । बुधवार तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले पहिलाभन्दा केही खुकुलो व्यवस्थासहित निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको थियो।
कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै हाल देशका ७७ मध्ये ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा लागु गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मुख्य गरी दुईवटा कारणले निषेधाज्ञा केही खुकुलो पारिएको हो। विगतको तुलनामा पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमितहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
आमनागरिकको जीवनयापनमा पनि केही सहजता आओस् भनेर केही खुकुलो पारिएको उनले बताए। बिहीबारसम्म लागु निषेधाज्ञामा खाद्यान्न, किराना पसल तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूलाई समेत साताभरिका लागि बन्द गराइएको थियो।
स्थानीय प्रशासनले लागु गरेको आदेशको अवज्ञा गर्नेहरूलाई कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ। अध्यादेशबमोजिम कुनै काम गर्न बाधा अवरोध सिर्जना गर्न नहुने र गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। अनुमतिविना चलाइएका सवारीसाधन सुरक्षाकर्मीले निश्चित समयका लागि नियन्त्रणमा पनि लिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
जरिवानाबारे अध्यादेशमा यी व्यवस्था गरिएका छन् । मापदण्ड पालना नगरे छ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने अध्यादेशमा भनिएको छ। त्यसैगरी अध्यादेशविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्मका लागि बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछन्।
बैतडीमा असार १५ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप २२ घण्टा पहिले
नेप्सेमा सिटिजन्स बैंकको १ करोड ८४ लाख कित्ता शेयर सूचीकृत २८ मिनेट पहिले
सुध्रिएन खर्च प्रणाली,रोकिएन असारे विकास ३६ मिनेट पहिले
आजदेखि महिला भलिबल टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु ५३ मिनेट पहिले
मनाङेको अभिव्यक्तिप्रति राखेपको गम्भीर ध्यानाकर्षण, कारबाहीको माग ५६ मिनेट पहिले
१९ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न जीवन विकास लघुवित्तले पायो अनुमति ५७ मिनेट पहिले
भारतमा ७४ दिन यताकै सब भन्दा कम कोरोना संक्रमित २० घण्टा पहिले
सप्तरीमा निर्माण शुरु गरेको शपिङ कम्प्लेक्सको काम अलपत्र २१ घण्टा पहिले
खन्ने खोलाको बाँध बगेपछि चुरे फेदीको बस्ती जोखिममा १८ घण्टा पहिले
मनसुन थप सक्रिय, धेरै ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना १ दिन पहिले
प्रदेश पत्रकार महासंघसंग सहकार्य गर्ने मन्त्री पाण्डेको प्रतिबद्धता १८ घण्टा पहिले
आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने गरी कार्ययोजना बनाउन गृहको निर्देशन ४ दिन पहिले
मेलमिलापबाटै समाधान हुन्छ न्यायिक समितिका मुद्दा ७ दिन पहिले
नागरिकता अध्यादेशको खारेजीपछि महतो सरकारबाट फिर्ता होलान् ? ५ दिन पहिले
बैंकर्सलाई कोरोना लागेपछि जिल्लाभरका बैंक बन्द ४ हप्ता पहिले
आईपीओ निष्कासन प्रस्ताव पारित गर्न रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले असार ४ गते बोलायो साधारण सभा ३ हप्ता पहिले
आफूखुशी आर्थिक सङ्कलन नगर्न प्रशासनको आग्रह ३ हप्ता पहिले
कोरोना संक्रमितलाई सम्मान, प्रोत्साहनसहित निःशुल्क भोजन ४ हप्ता पहिले
बागलुङ नगरभित्रका ग्रामीण सडक धमाधम कालोपत्र हुँदै ७ दिन पहिले
नेपालमा ‘ताउ–ते’ को प्रभाव कमजोर बन्दै ४ हप्ता पहिले
नागरिक लगानी कोषले गर्यो ५९ करोड बढि मुनाफा, प्रतिशेयर आम्दानी कति ? ४ हप्ता पहिले
साना सहकारीलाई मर्ज गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका १ वर्ष पहिले
युरोपमा कार बिक्रीमा २५ प्रतिशतले घट्यो १२ महिना पहिले
लकडाउनमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन निर्देशक समितिको निर्णय १ वर्ष पहिले
महिला चेम्बरको ट्रेड फेयर समापन (फोटोफिचर) ३ महिना पहिले